को कुन प्रकारको “व्यक्ति” हो भन्ने कसरी जान्ने ? – Sapana Sanjal
को कुन प्रकारको “व्यक्ति” हो भन्ने कसरी जान्ने ?
June 30, 2021 247
Sapana Sanjal : यथाभुतखेमिन्द
अतुलनीय तथागत सम्मासम् भगवान बुद्धले कोसल राजालाई ४ प्रकारका पुद्गल (व्यक्ति) हरूको बिषयमा उपदेश गर्नु भएको थियो।
१. राजन, कुनै व्यक्तिहरु गरिब निच जातियको कुलमा जन्म भएर प्रयोग वस्तु, लगाउने, खानलाई असाध्यै दुःख कष्ट सहेर खोजी बल्लबल्ल खान लगाउन परेको हुन्छ। रुपरङ्ग पनि कुरूपता (हेर्नमा नराम्रा) हुन्छन्।
धेरै रोग ब्याधहरू ले पनि ग्रस्त हुन्छन्। त्यस प्रकारका व्यक्तिहरुले शरीर, बचन, चित्त तिनै वटाबाट नराम्रो दुश्चरित्रहरूलाई गरेको हुनाले मृत्यु पछि नरक चार अपायमा खस्ने हुन्छन्। त्यस प्रकारका व्यक्तिहरु अंध्यारोबाट आएर अंध्यारो मै फर्केर जाने व्यक्ति हुन्।
राजन, यस लोकमा कुनै व्यक्तिहरु निच जातियको कुलमा जन्म लिएर प्रयोग वस्तु, लगाउने, खानेलाई असाध्यै दुःख कष्ट सहेर खोजी गरेर आफ्नो आजीविका चलाएका हुन्छन्। रुपरङ्ग पनि राम्रो हुँदैन। रोग ब्याध पनि धेरै हुन्छ। तर त्यस प्रकारका व्यक्तिहरुले शरीर, बचन, चित्तद्वारा राम्रो सुचरित्र धर्महरुलाई आचरण गरेको हुनाले मृत्यु पछि सुगति स्वर्गको बास हुन्छ। त्यस प्रकारका व्यक्तिहरुलाई अंध्यारोबाट आएर उज्यालोमा जाने व्यक्ति भनिन्छ।२.
राजन, यस लोकमा कुनै व्यक्तिहरु उच्च जातिय धन सम्पत्तिले परिपूर्ण भएका महाजनको कुलमा जन्म भएर लगाउने, खाने प्रयोग वस्तुहरू सहजै गरी प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन्। रुपरङ्ग पनि राम्रा हुन्छन्। रोगब्याधिहरूले मुक्त भएका राम्रो स्वास्थ्य आरोग्यवान हुन्छन्।
तर त्यस प्रकारका व्यक्तिहरुले काय, वचन, चित्तद्वारा नराम्रो दुश्चरित्र गरेको हुनाले मृत्यु पछि नरक चार अपायमा खसेर पुग्ने हुन्छन्। त्यस प्रकारका व्यक्तिहरु उज्यालोबाट आएर अंध्यारोतर्फ जाने व्यक्तिहरु हुन्।३.
हे राजन, यस लोकमा कुनै व्यक्तिहरु उच्च जातिय धन सम्पत्तिले परिपूर्ण भएका महाजनको कुलमा जन्म भएर लगाउने, खाने प्रयोग वस्तुहरू सहजै गरी प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन्। रुपरङ्ग पनि राम्रा हुन्छन्।४.
रोगब्याधहरू बाट मुक्त भएका राम्रो स्वास्थ्य आरोग्य वान हुन्छन्। त्यस व्यक्तिहरु कायिक, वाचिक, मानसिक तीनैवटाद्वारा राम्रो सुचरित्रहरू लाई आचरण गरेको हुनाले मृत्यु पश्चात सुगति स्वर्गको बास हुन्छ।
त्यस व्यक्तिहरु उज्यालो बाट आएर उज्यालो मै जाने व्यक्तिहरु हुन् भनेर भगवान बुद्धले यस देशनालाई कोसल राजालाई उपदेश गर्नु भयो।- अनुवाद – बिष्णु धनञ्जय
Nextगौतम बुद्धका ५ अनमोल वचन, तपाईँलाई कति उपयोगी ?